टोयोटा ल्यान्ड क्रूजरका लागि एन्ड्रोइड कार स्टेरियो China Manufacturer
विवरण:टोयोटा ल्याण्ड क्रूजरका लागि कार स्टेरियो,ल्यान्ड क्रूजरका लागि एन्ड्रोइड कार स्टेरियो,टोयोटा ल्याण्ड क्रूजर
Home > उत्पादनहरू > टोयोटा एन्ड्रोइड कार डीभीडी > टोयोटा ल्यान्ड क्रूजरका लागि एन्ड्रोइड कार स्टेरियो
टोयोटा ल्यान्ड क्रूजरका लागि एन्ड्रोइड कार स्टेरियो
मोडेल संख्या: KD-9006
टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डीभीडी
१. टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डिभिड २०० 2008-२०१२ देखि कारको लागि फिट। यो "" ल्यान्ड क्रुजर कार डीभीडीसँग ठूलो स्क्रिन छ त्यसैले स्क्रिनमा धाराप्रवाह जानकारी प्रदर्शन गर्न सक्दछ।
२.डीएबी क्लाईड ईतिहासको ठूलो विकास हो। यो प्रकार्यको टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर कार डीभीडीलाई बढी बेच्ने पोइन्टहरू दिनुहोस्। टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डीभीडी DAB फंक्शनको साथ, बजारमा राम्रो बिक्री हुन्छ, विशेष गरी युरोपका ग्राहकहरू मन पराउँछन्।
T. टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डीभीडीका लागि एन्ड्रोइड .0.० प्रणाली, यो हाम्रो एन्ड्रोइड प्रणालीको नयाँ दिशा हुनेछ। हाम्रो एन्ड्रोइड प्रणाली डीभीडी स्थिर र राम्रो गुण हो, हामीलाई स्वागत स्थान अर्डर।
सर्वप्रथम तपाईले हाम्रो वेबसाइट वा अरू कहीँबाट नक्शा अपडेट डाउनलोड गर्नु पर्छ। त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई जीपीएस एसडी कार्डमा प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छ र सेटि setting मार्फत टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डीभीडी प्लेयरमा नेभिगेसन मार्ग सेट गर्नुहोस्।
नेभिगेसन प्रयोग गर्दा संगीत वा रेडियो सुन्न यो सम्भव छ?
हो, टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डीभीडी प्लेयर नेभिगेसन प्रणाली प्रयोग गर्दा रेडियो वा संगीत सुन्न यो सम्भव छ।
क्लेटन उपकरणहरूले एक अद्वितीय प्रविधि प्रयोग गर्दै छन् जसले संगीत सुन्नलाई पक्का गर्छ जब तपाईं टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर कार डीभीडी प्लेयर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
कोरोलाको लागि जीपीएसको साथ ओरिया कार रेडियो अब सम्पर्क गर्नुहोस्
कोरोलाको लागि Orea कार मल्टिमेडिया प्रणाली अब सम्पर्क गर्नुहोस्
हिल्क्स २०१-201-२०१ for को लागि कार नेभिगेसन मनोरंजन प्रणाली अब सम्पर्क गर्नुहोस्
क्रूजर ड्यासबोर्ड इकाइहरू एन्ड्रोइड .0.० प्रणालीहरू अब सम्पर्क गर्नुहोस्
Android .0.० स्वत: रेडियो प्रणाली क्रूजर २०१ for को लागि अब सम्पर्क गर्नुहोस्
CORSA 2015-2016 को लागि नेभिगेसनको साथ कार रेडियो अब सम्पर्क गर्नुहोस्
Avalon २०१-201-२०१ for को लागि विशेष कार डीभीडी प्लेयर अब सम्पर्क गर्नुहोस्
हिलक्स एन्ड्रोइड .0.० कार मल्टिमेडिया प्रणालीहरू जीपीएस नेभिगेसनको साथ अब सम्पर्क गर्नुहोस्
टोयोटा ल्याण्ड क्रूजरका लागि कार स्टेरियो ल्यान्ड क्रूजरका लागि एन्ड्रोइड कार स्टेरियो टोयोटा ल्याण्ड क्रूजर ल्याण्ड क्रूजरका लागि कार मल्टिमेडिया ल्याण्ड क्रूजर २०१ for को लागि कार स्टेरियो ल्याण्ड क्रूजरका लागि कार नेभिगेसन आउटल्यान्डरका लागि कार स्टेरियो ल्याण्ड क्रूजरका लागि कार रेडियो प्रणाली